Ny milina fivarotana McDonald dia eto | Vaovao momba ny gadget
Tonga eto ny milina fivarotan'i McDonald
Salama matavy loatra, milahatra veloma. Ary i McDonald's dia manohy manova ny fomba "fihinanantsika" miorina amin'ny hamburgerany. Eny, raha tonga tao amin'ny McDonald's tany Puerta del Sol ireo masinina manafatra mandeha ho azy, ny zavatra manaraka dia ireo milina mpanome hamburger mandeha ho azy izay efa novolavolain'ny orinasa Amerikana Avaratra. Toa tsy dia mampientanentana loatra izany, tsy hamitaka anao izahay, fa mieritrereta ny korontana mety hateraky ny masinina toy izany ao amin'ny efitrano famakiam-boky eny amin'ny anjerimanontolo. Andao hojerentsika akaiky ireo milina fivarotana hamburger izay efa andrana ny McDonald's.
Ka i Boston dia manomboka ny fitsapana ireo dispensers hamburger ireo, ahoana no matsiro (mariho ny fihoaram-pefy). Maimaimpoana ireo ATM Hamburger tamin'ny andro voalohandohany, noho izany mba hampahafantarana azy haingana, nomen'ny Grand Mac / Grand Mac Jr anao na Big Mac izy ireo ho takalon'ny bitsika. Na izany aza, tapitra ny fampiroboroboana ary raha mila ny masininao Big Mac ianao dia mila mandoa izany ianao. Tsy azoko atao ny mijanona tsy mieritreritra momba ny boaty milina fivarotana sy ilay ataoko any an-trano miaraka amin'ny Nespresso, mba harary ...
Tsy ho afaka hahazo ovy na zava-pisotro miaraka amin'ilay masinina ianao, ary iray amin'ireo mieritreritra aho fa tsy sakafo mendrika ny hamburger tsy misy kojakoja. Ny traikefa no tena mahaliana indrindra, ary tsy ho sarotra loatra ny mampiditra farafaharatsiny ny zava-pisotro, ny zava-drehetra dia mbola ao anatin'ny dingana fitsapana. Ny fomba anatiny ao anaty ny masinina dia zavatra mbola itehirizan'ny firenena amerikana avaratra, na dia tsy sarotra ho antsika aza ny mieritreritra fa mety ho lasa akanim-borona tsara ho an'ny biby mpikiky sy ny bibikely izy io.
tsikelikely McDonald's dia hitsapa ny famoronana, ary raha misy ny fandraisana ny besinimaro antenain'izy ireo dia hanomboka hahita azy ireo amin'ny toerana afovoany sy malaza kokoa izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tonga eto ny milina fivarotan'i McDonald
Ny fanombohana Android Wear 2.0 dia iray andro mialoha: 8 feb
Tia Tanindrazana vs Falcons na ahoana ny fomba hijerena mivantana ny Super Bowl 2017 amin'ny Internet